Shiinaha warshadda Shiinaha oo tayo sare leh oo keeni karta warshad yar yar oo wax soo saarta iyo soo saarayaasha |Wanda
Warshada Shiinaha oo tayadeedu sarreyso keenista giraanta wax-soo-saarka qodista yar yar
Meesha wax lagu dilo ee qodista qodista yar waxay asal ahaan u baahan tahay in la beddelo labadii ilaa saddexdii sanoba mar.Inta badan sababaha waa burburka qalabka giraanta iliga.Radius weyn oo gyration ah, culays sare oo muddada dheer ah, iyo shaqo xad dhaaf ah, taasoo keenta in qalabka giraanta iliggu dumo.Dhibaatooyinka tayada wax lagu gowraco ee haysta qayb yar.
XUZHOU WANDA SLEWING BEAARING CO., LTD waxay jeclaan lahayd inay ku siiso qiimaha ugu hooseeya ee soo kabashada ~
Meesha wax lagu dilo ee qodista qodista yar waxay asal ahaan u baahan tahay in la beddelo labadii ilaa saddexdii sanoba mar.Inta badan sababaha waa burburka qalabka giraanta iliga.Radius weyn oo gyration ah, culays sare oo muddada dheer ah, iyo shaqo xad dhaaf ah, taasoo keenta in qalabka giraanta iliggu dumo.Thegiraanta wax lagu dilodhibaatooyinka tayada qabsanaya qayb yar.
Gawaarida rotary-ga ah ayaa si weyn loogu isticmaalaa mishiinada dhismaha, waa meesha ugu horeysa uguna badan ee loo isticmaalo qashinka rotary, ma aha oo kaliya in loo isticmaalo qodista, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa mishiinada dhulka, burburinta mishiinada, dhejiyeyaasha iyo dib u soo celinta, graders. rullaluistemadka, compactors firfircoon, mishiinada qodista dhagaxyada, madax wadada iyo wixii la mid ah.
Qodista, inta badan isticmaalka qalabka wax lagu dilo ee gudaha oo ilig demiyay.Adkeega iliga demiyay waa 50-60HRC.
Fadlan eeg shaxda qeexida wax-ku-dhufashada ee lifaaqan si aad u dooratid qaabka ku habboon ee aad uga baahan tahay qodistaada.
Xuzhou wanda slewing bearing co., Ltd waa xirfadle xagga wax soo saarka kala duwangiraanta wax lagu dilou adkaysiga qodayaasha yaryar.Qalabka wax lagu gowraco waa la demiyay, iligguna wuu adkaaday.Haddii aad qabto wax dalab ah, fadlan nala soo xiriir si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Hore: rullaluistemadka saddex saf oo wax lagu dilayo
Xiga: xzwd OEM qiimaha ugu fiican ee kubbadda lagu qaadi karo wiishka
1. Heerarkayaga wax-soo-saarku waa sida waafaqsan heerka mishiinnada JB/T2300-2011, sidoo kale waxaa naloo helay Nidaamyada Maareynta Tayada tayada leh (QMS) ee ISO 9001: 2015 iyo GB/T19001-2008.
2. Waxaan nafteena u hurnaa R&D ee wax-dilid la habeeyey oo leh sax sare, ujeedo gaar ah iyo shuruudo.
3. Iyada oo alaabooyin badan oo cayriin ah iyo wax soo saar sare leh, shirkadu waxay macaamiisha u keeni kartaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah waxayna soo gaabin kartaa wakhtiga macaamiisha sugaan alaabta.
4. Xakamaynta tayada gudaha eeyada waxaa ka mid ah kormeerka koowaad, kormeerka wadajirka ah, ilaalinta tayada shaqada iyo kormeerka muunad si loo hubiyo tayada alaabta.Shirkaddu waxay haysataa qalab tijaabo ah oo dhamaystiran iyo hab tijaabo ah oo horumarsan.
5. Kooxda adeegga iibka ka dib xoog leh, waqti ku xalliya dhibaatooyinka macaamiisha, si ay u siiyaan macaamiisha adeegyo kala duwan.
Shiinaha Qodista Qodista
Qodista Rogasho leh
qiimaha wax lagu laayo
giraanta wax lagu dilo
XZWD Dhexroorka Yar ee kubbadda safka ah ee garaaca b...
XZWD 011.60.2800 Gear Dibadda ah Kubad Safka Keliya ...
XZWD dhexroor weyn oo hal saf ah kubad polymer slewi ...
XZWD OEM hal saf oo kubbadda saxda ah ee wax lagu liso
XZWD Hot iibka OEM hal saf kubad afar dhibcood c ...